I-UserVoice: Ingxelo, isicelo seNqaku kunye nokuKhangelwa kweBug kwenziwa ngokuLula! | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 18, 2013 NgoLwesithathu, Septemba 18, 2013 Douglas Karr
Abantu UmsebenzisiVoice bebexakekile besakha kwaye bevavanya izixhobo ezitsha ukukunceda ukuba ubandakanye abasebenzisi bakho, ukuba ngcono, ingxelo eqhutywa yidatha, kunye nokubonelela ngenkxaso engcono kunangaphambili. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo bebevavanya ezinye zezixhobo ngaphakathi koncedo lwabasebenzisi be-UserVoice, kubandakanya ukoneliseka kunye newijethi zeSmartVote, kunye nefom entsha, elula. Namhlanje, benza ukuba ezi zixhobo zintsha zifumaneke kuwo wonke umntu!
Dibana newidget entsha
Iwijethi ecingisiswe ngokupheleleyo inikezela ngamava apheleleyo, ngaphakathi nohlelo kubathengi bakho ukuba bafumane uncedo abaludingayo kunye nawe (ngokusebenzayo) bacele ingxelo oyifunayo. Inika iSmartVote ™, iiRatings zokwaneliseka, kunye nokuphuculwa kweempendulo ezikhawulezayo zefom yoqhakamshelwano.
Ukuqonda komsebenzisi kukuvumela ukuba ufumane ukuqonda ngakumbi kubo bonke abasebenzisi bakho-ayisiyiyo eyokunika ingxelo ethile okanye ungenise amatikiti. Icandelo kunye nokumba phantsi kwiimpawu ezithile zomsebenzisi, kubandakanya iintlobo zomsebenzisi, isicwangciso, inqanaba lomsebenzi, inqanaba lokoneliseka, ingeniso ephindaphindekayo yenyanga, ixabiso lobomi, nokunye okuninzi.
Ukulinganisa ukwaneliseka kukuvumela ukuba ulandele ngokulula imikhwa kunye nokulungelelanisa iimpendulo ezilungileyo okanye ezimbi kunye neendawo ezithile zokuphuculwa kwemveliso. Ukunyanzelwa ngaphakathi kwe-app kubonelela ngenqanaba lokuphendula eliphezulu kunophando lwe-imeyile yesiko kwaye ikuvumela ukuba ulinganise i-ROI yenkxaso enkulu.
Qhuba kumacandelo athile omsebenzisi ukuze ubone ukuba utshintsho lutshintsha njani kubemi. Chonga ababhengezi bakho kwaye uthintele i-churn ngaphambi kokuba yenzeke. Khuthaza abaxhasi ukuba basasaze igama ngeetweets.
Ingxelo yoMsebenzisi w / SmartVote ™
Ingxelo yomsebenzisi weNgxelo yeBeta yindlela entsha, eqhutywa yidatha yokuhlela, ukucoca kunye nokubala izibalo kwingxelo ethunyelwe kwiakhawunti yakho. Idibanisa idatha kwiwijethi entsha yeSmartVote ™ kunye nedatha yokuqonda komsebenzisi ukukunceda ufumane ukuba zeziphi izimvo ezibaluleke kakhulu kwiiseti ezahlukeneyo zabasebenzisi.
Oku kuhamba ngaphaya kwenkqubo yabo yokuvota yelifa lokukunika idatha oyifunayo ukuze wenze izigqibo ezifanelekileyo eziza kuthatha imveliso yakho (kunye neenombolo zokugcina) ukuya kwinqanaba elilandelayo.
Iwijethi entsha yeSmartVote ivumela abasebenzisi ukuba babeke phambili ukuba zeziphi izimvo ezishushu kwaye zeziphi izimvo ezingekhoyo kwaye ikuvumela ukuba ufikelele kwiziphumo ezibalulekileyo ngokwezibalo. Hluza kwaye uhlele izimvo kuyo yonke i-akhawunti yakho- hayi ngaphakathi kweforum ethile. Ukubeka phambili ingxelo malunga nomsebenzisi kunye neempawu zeakhawunti.
Ifom entsha yoqhakamshelwano lwewebhu yakho yewebhu
Ngelixa ukufaka iwijethi entsha kwindawo yakho kukhetho olukhethiweyo, kwiveki ezayo UmsebenzisiVoice iyakuthatha indawo yefom "yoQhakamshelwano lokuNxibelelana" kwiWebhusayithi yeWebhu yeVidiyo (subdomain.uservoice.com) kunye neWidget yoQhakamshelwano entsha:
Ezi zinto zintsha ngoku ziyafumaneka kubo bonke UmsebenzisiVoice iiakhawunti. Ukuba ukwimpendulo endala-kuphela okanye isicwangciso sedesika-yoncedo kuphela, i-UserVoice inokukunceda ukuba uhambise iakhawunti yakho uye kwesinye sezicwangciso zabo ezitsha ukuqala ukonwabela yonke i-UserVoice. Ukufaka iwijethi entsha, ndwendwela iisetingi zeakhawunti yakho okanye ufunde ngakumbi malunga nokuseta iwijethi entsha.
tags: ingxelo yabathengiuxhaso lwabathengiIngxelo yomsebenzisiizimvo zomsebenzisiUmsebenzisiVoice
Iiwebhusayithi zisenguMthombo oSebenzayo weNgeniso yokuNgena
Jul 17, 2009 ngo-1: 51 PM
Ndiyayithanda imbono yakho yokusebenzisa inkqubo yokulandela umkhondo we-bug ukuze uhlale unxibelelana nabantu abasebenzisa ikhowudi yakho kodwa inkonzo yelizwi lomsebenzisi ayisiyiyo eyona ndlela ilungileyo. Ndingathanda ukubona iplagi yeWordPress yokulandela umkhondo we-bug kodwa andiyifumani. Ndijonge i-bugzilla kubafana base-mozilla kwaye ndiyayithanda, kodwa andinakuyifaka kuba andinakufikelela kwigobolondo kwiakhawunti yam yokubamba. Okwangoku, ndisavavanya uMntanezulu afumaneka kwi-mantisbt.org, kodwa andiqinisekanga ngayo kuba ikhowudi kunzima ukuyiqonda kwaye ke kunzima ukuyiguqula nokusebenzisa imixholo, njl. . Luis
Jul 18, 2009 ngo-5: 23 PM
Ngaba kukho iseto ukuze icandelo 'le-bug' ezantsi kwifestile yempendulo ibonise? Ayibonisi kum, kwaye ndiziva ngathi ndiphoswa yinto ebonakalayo kumlawuli…
Jul 18, 2009 ngo-5: 30 PM
Ungaze ucinge… ndiyifumene. Okwangoku andikazazi ukuba ndizakuthini - xa ndongeza izimvo zesihloko esitsha, kutheni zingabonakali kwiscreen sam sokuqala, emva kokucima izihloko ezingagqibekanga…
Sep 19, 2013 kwi-1: 53 AM
Kulungile, enkosi ngokwabelana…!